Sex for business and Fun (Nepali)
Topic: Sex for business and Fun (Nepali)
Author Topic: Sex for business and Fun (Nepali) (Read 47026 times)
Re: Sex for business and Fun (Nepali)
« Reply #30 on: October 17, 2009, 11:46:35 AM »
यौनअखडा हटाउन ठमेलमा विशेष अभियान
केपी ढुंगाना (नयाँ पत्रिका)
काठमाडौं, ३० असोज
वेश्यावृत्ति, गुन्डागर्दी र पैसा-असुलीका घटनामा वृद्धि भएपछि प्रहरीले ठमेलकेन्दि्रत 'ठमेल अपराध सफाइ अभियान' सुरु गरेको छ । अभियानमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र लैनचौर प्रभाग संलग्न छन् ।
मंगलबारबाट सुरु भएको ठमेलकेन्दि्रत विशेष अभियानअन्तर्गत पहिलो टार्गेट होटल, लज तथा मसाज केन्द्र बनाइएको छ भने दोस्रो टार्गेटमा डान्स रेस्टुरेन्ट, गुन्डागर्दी र रकम-असुलीलाई बनाइएको छ ।
प्रहरीले बिहान, मध्याह्न र बेलुका हुनसक्ने आपराधिक घटनाको आधारमा ठमेल क्षेत्रमा टार्गेट बनाएर विशेष अप्रेसन चलाइरहेको छ । यसबीचमा प्रहरीले होटलको आवरणमा यौनधन्दा चलाइरहेका पाँचवटा गेस्टहाउसमा छापा मारी ४० जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
प्रहरीले ठमेल क्षेत्रकेन्दि्रत गरेर सादा पोसाकका प्रहरीहरूको संख्या बढाएको छ भने स्थानीय प्रहरी इकाइलाई समेत ठमेलकेन्दि्रत गराएको छ ।
अभियानअन्तर्गतको टोलीले बुधबार र बिहीबार ठमेलमा रहेका विभिन्न गेस्टहाउसमा छापा मारेको थियो । छापा मार्नेक्रममा सिल्करोड गेस्टहाउस, पिस फेवा गेस्टहाउस, श्रीगणेश गेस्टहाउस र सन्ध्या होटल तथा गेस्टहाउसमा यौनजन्य क्रियाकलाप भइरहेको फेला परेपछि प्रहरीले १५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
परिसरका प्रमुख नवराज सिलवालका अनुसार पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा परिचित भए पनि वेश्वावृत्ति, गुन्डागर्दी र रकम-असुलीका घटनामा वृद्धि भएको जनगुनासोसमेत बढेपछि ठमेलकेन्दि्रत गरेर सफाइ अभियान सुरु गरेको बताए । उनले अभियानको उद्देश्य अपराध नियन्त्रण रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'मंगलबारबाट अभियान सुरु गरेका छौँ, प्रारम्भ सकारात्मक छ ।'
लैनचौर प्रभागका प्रमुख रुगमबहादुर कुँवरका अनुसार ठमेल क्षेत्रमा करिब दुई सय ५० होटल तथा गेस्टहाउस तथा दुई सय २० वटा रेस्टुरेन्ट रहेका छन् । उनले भने, 'यीमध्ये २० वटा गेस्टहाउस र २५ वटा रेस्टुरेन्टमा गैरकानुनी काम हुने गरेको हाम्रो रेकर्डमा देखिन आएको छ । त्यहीअनुसार अप्रेसन पनि अघि बढेको छ ।'
कुँवरका अनुसार समय हेरेर प्रधान कार्यालय, आयुक्तको कार्यालय र काठमाडौं परिसरबाट विशेष टोली आएर शंकास्पद स्थानमा छापा मार्ने गरेको छ । टोलीलाई संयोजन गर्ने काम प्रभागले गर्दै आएको छ । उनले भने, 'माथिबाट टोली आउने जानकारी आएपछि त्यहीअनुसारको तयारी गछौँ ।'
काठमाडौं परिसरले ठमेलका साथै काठमाडौंका अन्य होटल तथा लजलाई समेत अहिले वाच लिस्टमा राखेको छ । स्थानीयवासीबाट आएको गुनासोका आधारमा परिसरको विशेष टोलीले बुधबार बागबजारको सप्तमार्गमा रहेको सिराहा-लाहान गेस्टहाउसमा छापा मार्दा गेस्टहाउसको आवरणमा यौनकोठी सञ्चालनमा रहेको फेला पारेको थियो ।
प्रहरीले गेस्टहाउसभित्र ग्राहकका लागि कोठीको शैलीमा कोठाहरू विभाजन गरेको फेला पारेपछि यौनधन्दामा संलग्न र उसका ग्राहक गरी ३० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ सबैलाई काठमाडौं परिसरले हिरासतमा राखेर सार्वजनिक अपराधमा कारबाही अघि बढाएको छ ।
« Reply #31 on: November 05, 2009, 12:41:07 PM »
नेपालमा चाइनिज वेश्यालय
काठमाडौंको ठमेलमा विदेशी पयर्टक मात्र होइन, विदेशी यौनकर्मी पनि सक्रिय रहेछन् । फाट्टफुट्ट होइन, बकाइदा कोठी खोलेरै यौन व्यवसायमा संलग्न चाइनिज युवती र तिनका नेपाली ग्राहकलाई प्रहरीले बुधबार बेलुका पक्राउ गरेको छ ।
ठमेलको शिक्षा मन्त्रालयपछाडि तीनतले भव्य बंगला भाडामा लिएर चाइनिज दम्पतीले कोठी चलाउँदै आएका थिए । सञ्चालक पक्राउ परेका छन् भने उनकी श्रीमती फरार छिन् ।
प्रहरीले बुधबार बेलुका आठ बजे बंगलामा छापा मारेर कोठी सञ्चालक पुरुष, ६ चाइनिज युवती र ६ नेपाली ग्राहकलाई पक्राउ गरेको छ । ठमेलको यो वेश्यालयलाई प्रहरीले दुई महिनादेखि निगरानीमा राखेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । ठमेलमा अरू विदेशी युवतीका पनि कोठी रहेको प्रहरी आशंका छ ।
अग्लो पर्खालले घेरिएको तीनतले भव्य घरमा रहेका नौवटा कोटामध्ये तीनवटा कोठा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका थिए भने बाँकी ६ कोठा यौनलीलाका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए । यौनलीलाका लागि छुट्याइएका कोठाहरूमा आकर्षक सजावटका साथै २९ इन्चका टेलिभिजन, सिडी प्लेयर र ब्लु फिल्मका सिडीहरू राखिएका थिए ।
प्रहरीले बेलुका साढे आठ बजे घरमा छापा मार्दा चिनियाँ केटीहरू ग्राहकसँग मस्त थिए । प्रहरीका अनुसार डेढ महिनाअगाडि ठमेलमा चिनियाँ नागरिकले कोठी चलाउने गरेको जानकारी आएपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो ।
डेढ महिनाको निरन्तर निगरानीपछि सो बंगलामा कोठी सञ्चालित रहेको निष्कर्षपछि बुधबार प्रहरीले छापा मारेको थियो । कोठीमा छापा मार्न परिसरको टोली सादा पोसाकमा खटिएको थियो । आठ बजेदेखि नै सो बंगलामा आउने-जाने व्यक्तिहरूको निगरानी गरी साढे आठ बजे छापा मारेको थियो ।
बंगलाभित्र प्रहरी प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा सञ्चालकले भित्रबाट गेटमा चुकुल लगाइदिएपछि प्रहरी पर्खाल नाघेर भित्र छिरेको थियो । प्रहरी टोली भित्र प्रवेश गरी कोठा-कोठामा जाँदा जोडीहरू मदिरामा लठ्ठ भएर आपसमा जोल्ठिएका थिए ।
प्रहरी टोली कोठा-कोठामा छिर्न थालेपछि चिनियाँ केटीहरू र नेपाली ग्राहकहरू चिच्याउँदै भाग्ने प्रयास गरेका थिए । प्रहरीले पूरै घरमा खानतलासी लिएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन करिब एक घन्टा लागेको थियो ।
प्रारम्भमा थोरै व्यक्ति रहेको निष्कर्ष निकालेर घरभित्र छिरेका प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिन हम्मे पर्‍यो । छापा मार्न खटिएको टोलीले मात्र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि थप प्रहरी फोर्स मगाउनुपरेको थियो । प्रहरीले कोठाहरूमा छापा मार्दा कन्डम र ब्लु भिडियोका सिडीहरू फेला पारेको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार सो कोठीमा प्रायः भव्य सवारीसाधन लिएर नेपाली र विदेशी नागरिकहरूको बाक्लो आउजाउ हुने गरेको थियो । तर, बुधबार छापा मार्दा कुनै विदेशी ग्राहक भने फेला परेनन् ।
प्रहरीका अनुसार कोठी सञ्चालक चाइनिज नागरिक नै हुन् । नेपाली भाषाका पोख्त सोनाम नामका चिनियाँ नागरिकले सो बंगला भाडामा लिएका हुन् । उनलाई आफ्नी श्रीमतीले कोठी चलाउन सहयोग गरिरहेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले प्रतिग्राहक रातभरको २५ हजार नेपाली र एकपटकको पाँच हजार रुपैयाँ लिने गर्थे । स्रोतले भन्यो, 'उनीहरू बाहिर होटलमा जानुपर्‍यो भने थप चार्ज लिन्थे ।'
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख नवराज सिलवालले ठमेलमा चिनियाँ नागरिकले कोठी चलाउने गरेको जानकारी आएपछि निगरानी गरेर छापा मारेको बताए । उनले भने, 'घरै भाडामा लिएर कोठीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी आएपछि हामीले निगरानी बढाएका थियौँ, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त जानकारी सत्य भएको पुष्टि भएपछि छापा मारेका हौँ ।'
सिलवालले पक्राउ परेका चिनियाँ र नेपाली दुवैलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले पक्राउ व्यक्तिहरू परिसरको हिरासतमा रहेको जानकारी दिँदै भने, 'चिनियाँ भए पनि उनीहरूले नेपालको कानुनको उल्लंघन गरेकाले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं ।'
यौन व्यवसाय गर्ने र कोठी चलाउनेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनको अभाव रहेकाले प्रहरीले उनीहरूलाई समाजमा उच्छृंखलता बढाएको अभियोगमा सार्वजनिक मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।
सिलवालले ठमेलमा विदेशीद्वारा सञ्चालित अन्य चारवटा अखडाको बारेमा समेत जानकारी आएको दाबी गर्दै ती सबै अखडा प्रहरीको निगरानीमा रहेको बताए ।
काठमाडौं परिसरको टोलीले केही महिना अगाडि कान्ति बाल अस्पतालपछाडि सञ्चालित कोठीमा छापा मारेर एक सभासद्सहित यौनकार्यमा संलग्न युवतीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
« Reply #32 on: November 05, 2009, 12:42:38 PM »
previous post was from nayapatrika
« Reply #33 on: November 05, 2009, 01:16:08 PM »
Nice articles Tundi bro! These articles only show the dark work of prostitution, and your efforts certainly will make many aware about why should prostitution be discouraged!
« Reply #34 on: November 05, 2009, 05:09:33 PM »
^ That's why you have signed up for forum.xnepali.com
These raids won't stop sex workers for doing so, rather will encourage them to protest against the government. Government should be responsible enough to provide jobs to people or shut the fuck up.
« Reply #35 on: December 31, 2009, 02:42:52 AM »
आपत्तिजनक अवस्थामा २५ जना पक्राउ
बुधवार, 30 डिसेम्बर 2009 16:14 नागरिक
काठमाडौँ, पुस १५ (नागरिक)- महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले ठमेलका तीन वटा गेस्ट हाउसमा छापा मारी यौन गतिविधिमा संलग्न २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
परिसर प्रमुख गणेश केसीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा १५ युवती छन्। छापा मार्ने क्रममा आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएकालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ।
पक्राउ परेका २५ जनालाई हिरासतमा राखेर सार्वजनिक ऐनअनुसार कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
« Reply #36 on: December 31, 2009, 02:43:52 AM »
जो पायो त्यहीसँग जाँदैनन् यौनकर्मी
मंगलवार, 29 डिसेम्बर 2009 15:54 नागरिक
रमेश गिरी, भक्तपुर, पुस १४ - यौनकर्मी महिलाहरूले अव आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग हुँदै एकातिर आफ्नो यौनसाथी घटाउन थालेका छन् भने अर्कोतर्फ भविष्य सुरक्षित गर्न आम्दानीको रकम बचतसमेत गर्न थालेका छन्।
भक्तपुरमा लामो समयदेखि कम्युनिटी एक्सन सेन्टरले यौन व्यवसायी महिलाहरूलाई सङ्कलन गरी उनीहरूका लागि सञ्चालन गरेको स्वस्थ्य जीवन एवम् सचेतना तालिम लिएपछि यौन व्यावसायीहरू स्वास्थ्यप्रति सचेत बनेका हुन्।
उनीहरू स्वास्थ्यप्रति सचेत रहँदै यौनसाथी घटाउन थालेका छन् भने दुर्व्यसनी र आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध नराख्ने गरेका छन्।
भक्तपुरमै यौन पेसामा संलग्न एक महिलाले अहिले यौनकर्मी महिलाहरू जो पायो त्यहीसँग यौन सम्बन्ध नराख्ने गरेको बताइन्।
यौनकर्मी महिलाहरू पनि सङ्गठित हुन थालेको बताउँदै ती महिला भन्छिन्-"पहिला दिनमा चार-पाँचजनासँग पनि यौनसम्बन्ध रहन्थ्यो भने अहिले दिनमा एक वा बढीमा दुईजना सँगमात्र यौन सम्बन्ध रहने गरेको छ।"
उनीहरू स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेकै कारण कन्डमबिना यौनसम्बन्ध राख्दैनन् भने महिनैपिच्छे स्वास्थ्य जाँचका लागि सिएसी नेपालले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिकमा जान बिर्सदैनन्।
अर्की यौनकर्मी महिला भन्छिन्-"अहिले त कन्डमबिना यौनसम्बन्ध राख्दैनौँ-"पुरुषले कन्डम नल्याए हामीसँग हुन्छ त्यहीँ दिन्छौँ। कन्डम लगाउन नमाने यौन सम्बन्ध नै राख्दैनौँ।"
कन्डमको प्रयोग नगरे एचआइभी/एड्समात्र नभई अन्य यौनजन्य सरुवा रोग लाग्ने सम्भावनाबारे थाहा पाएरै कन्डमको प्रयोग अनिवार्य गरेको यौन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यौन व्यवसायमा संलग्न महिलाहरू क्लिनिकमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गर्नाले ढुक्क हुनेगरेको बताउँछन्।
सिएसी नेपालकी अध्यक्ष तुलसालता अमात्य यौनकर्मी महिलाको स्वास्थ्यप्रति सचेतना अपनाउने र गोप्यरूपमा निःशुल्क क्लिनिकसमेत सञ्चालन गरेर उपचार एवम् परामर्श दिइरहेको बताउँछिन्।
यौनकर्मी महिलामध्ये केहीले त आफ्नो यौन जोडीको रूपमा एकैजनालाई मात्रै यौन साथी बनाउन थालेका छन्।
असल र सहयोगी व्यक्ति पाए एकजनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग यौनसम्बन्ध नराख्ने तथा त्यही व्यक्तिलाई सधैँ यौनसाथी बनाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
एकजनामात्रै यौनसाथी बनाउँदा स्वास्थ्य राम्रो हुने, निश्चित रकम पाउने, सम्बन्ध राम्रो हुने र पेसा गोप्य रहने हुनाले पनि कतिपय यौनकर्मीहरू एउटै भरपर्दो व्यक्ति रोज्न थालेका छन्।
यौनकर्मी महिलाले कमाएको रकमलाई अहिले पनि बचत गर्न थालेका छन्।
मोजमस्ती गर्ने, गरगहना जोड्ने, सिंगारका सामानमा बढी रकम खर्च गर्नेभन्दा पनि बैङ्क तथा फाइनान्समा भविष्यका लागि वचत गर्न थालेको यौन व्यवसायी महिला बताउँछन्।
यौन पेसाबाट मुक्त भएर वैकल्पिक पेसा अपनाउनका लागि पनि रकम जम्मा गर्नेक्रम बढेको छ भने कतिपय महिलाले यौन व्यवसायसँग अन्य सीपमूलक व्यवसाय पनि गर्न थालेका छन्।
"छोराछोरीको भविष्यका लागि मैले रकम जम्मा गर्न थालेको हुँ- एक यौन व्यवसायीले भनिन्।
"यो पेसाबाट मुक्त हुन आफूले पनि रकम जम्मा गर्न थालेको छु" अर्की यौनकर्मी महिलाले उत्साहित हुँदै बताइन्।
« Reply #37 on: December 31, 2009, 02:21:09 PM »
यौन व्यवसाय फस्टाएका काठमाडौँका छ स्थान प्रहरीको निगरानीमा
बिहिवार, 31 डिसेम्बर 2009 09:20 नागरिक
"फ्ल्याटै भाडामा लिएर कोठी चलाउने धेरै'
केपी ढुंगाना, काठमाडौं, पुस १६- प्रहरीले काठमाडौंका ६ स्थानलाई यौन व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र किटान गर्दै विशेष कार्ययोजना निर्माण गरेको छ। ती स्थानको नियमित अनुगमन गर्ने, सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर निगरानी बढाउने र शंकास्पद होटल गेष्ट हाउस र घरहरूमा छापा मार्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख गणेश केसीका अनुसार यौनकर्मीको चहलपहल बढी भएका क्षेत्रमा ठमेल, नयाँ बसपार्क क्षेत्र, पुरानो बसपार्क, बालाजु-नार्गाजुन क्षेत्र, कोटेश्वर र सुन्धारा रहेका छन्।
कार्ययोजनामा प्रहरीको पहिलो 'टार्गेट' गेष्ट हाउस र रिर्सोट छन्। प्रहरीले यौनकर्मी महिला र ग्राहकको बढी चहलपहल हुने होटल, गेष्ट हाउस र शंकास्पद व्यवहार हुने घरको सूची बनाई छापा मार्ने योजना बनाएको छ। केसीले भने, 'फ्ल्याट नै भाडामा लिएर गोप्यरूपमा सक्रिय यौनकोठीको संख्या बढिरहेको छ, त्यसैले होटल, गेष्ट हाउस र रिर्सोटसँगै यस्ता फ्ल्याटहरूको पनि निगरानी बढाएका छौं।'
प्रहरीले ठमेल क्षेत्रको सूची बनाई कारबाही सुरु गरेको छ। एसपी केसीले पर्यटकीय क्षेत्रको आवरणमा यौनधन्दा चरमोत्कर्षमा पुगेकाले ठमेल क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कारबाही सुरु गरेको बताए।
ठमेल क्षेत्रमा सञ्चालित २१ वटा गेष्ट हाउसमध्ये आठ वटामा यौनधन्दा हुने गरेको दाबी गर्दै कालोसूचीमा निर्माण गरी कारबाही सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार बेलुका ठमेलको २ वटा गेष्ट हाउसमा छापा मारेर प्रहरीले १५ जना यौनकर्मीलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले ठमेलको सिद्धार्थ र रिगल गेष्ट हाउसमा छापा मारेर प्रहरीले १० जना ग्राहकलाई समेत पक्राउ गरेको छ।
गेष्ट हाउसको आवरणमा यौनव्यापार सञ्चालन गरेको सुराकीको आधारमा छापा मार्दा आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएका युवा युवतीलाई पक्राउ गरेको परिसर प्रमुख गणेश केसीले बताए। पक्राउ परेका २५ जनालाई हिरासतमा राखेर समाजमा विकृति फैलाएको अभियोगमा कारबाही अगाडि बढाइएको केसीले बताए। उनले भने, '११/१२ बजे ठमेल पुग्ने हो भने सडकमा १५/१६ वर्षका यौनकर्मीहरू भेटिन्छन्। गेष्ट हाउस भनेका छन् तर यौनकोठीमा रूपमा चलेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको नाममा लज्जास्पद व्यवहार गर्न त पाइन्न नि?'
प्रहरीले पुस महिनामै ठमेलको ६ वटा गेष्ट हाउसमा छापा मारी ९२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पुस ४ गते ठमेलको स्टार होटल र श्रीगेष्ट हाउसमा छापा मारेर प्रहरीले १७ युवती र १६ जना युवकलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि चार वटा गेष्टहाउसमा छापा मारेर प्रहरीले ५९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
« Reply #38 on: January 03, 2010, 03:27:26 AM »
यौनकर्मी महिला कस्ता-कस्ता ?
02/01/2010 05:37:00 अर्जुन पौडेल
यौनकर्मी महिलाले विभिन्नखाले यौनहिंसाको सिकार हुनुपरेको अध्ययन प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ । उनीहरूले जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्नुपरेको समेत बताए ।
काठमाडौं, १७ पुस
यौनव्यवसायमा प्रवेश गर्ने नयाँ युवतीको संख्या प्रतिवर्ष थपिँदै गएको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । फेमेली हेल्थ इन्टरनेसनलले २००९ मा तराईका २२ जिल्लाका ६ सय यौनव्यवसायी महिलामा गरेको अनुसन्धानले २६ प्रतिशत व्यवसायीले यो पेसा अँगालेको एक वर्ष पनि नभएको देखाएको हो ।
अनुसन्धान राजमार्गवरिपरि यौनव्यवसायमा संलग्न र तराई भेगका यौनकर्मी महिलामा गरिएको थियो ।
यौनव्यवसायमा संलग्नमध्ये २८ प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको सो अध्ययनले दाबी गरेको छ । ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै यौनव्यवसायीले पहिलोपटक यौनसम्पर्क गर्दा १५ वर्षभन्दा पनि कम उमेर रहेको बताए । त्यस्तै, ६६ प्रतिशत यौनकर्मीका परिवार रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । 'परिवारका सदस्य यौनव्यवसायी महिलाको आम्दानीमा निर्भर छन्,' अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, ५७ प्रतिशतभन्दा बढी यौनव्यवसायीको परिवारमा दुईदेखि तीनजना सदस्य छन् ।
यौनव्यवसायमा संलग्न महिलाको शैक्षिकस्तर निकै कम भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूमध्ये करिब ५२ प्रतिशत निरक्षर छन् । निरक्षर यौनव्यवसायी महिलाले शिक्षाका लागि जीवनमा एकपटक पनि विद्यालय नटेकेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ६ प्रतिशतले मात्र एसएलसी र त्योभन्दा बढी अध्ययन गरेका छन् । करिब ५७ प्रतिशत यौनकर्मी विवाहित छन् । १७ प्रतिशत यौनकर्मी महिला कि त डिभोर्स गरेका छन् या त लोग्ने छाडेर बसेका छन् ।
त्यस्तै, ६ प्रतिशतभन्दा बढी विधवा पनि यौनव्यवसायमा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । करिब ५९ प्रतिशत यौनकर्मीको परिवारमा आश्रति पनि छन् । करिब ५८ प्रतिशत विवाहित छन् । २४ प्रतिशत विवाह नगरेका यौनव्यवसायमा छन् । विवाहितमध्ये पनि करिब २९ प्रतिशतले उनीहरूको श्रीमान्को अर्की पनि श्रीमती भएको बताएका थिए ।
सर्वेक्षणमा सहभागी यौनकर्मी महिलामध्ये ८० प्रतिशतसँग सर्वेक्षणकर्ताले प्रत्यक्ष भेटेका थिए । अन्यसँग यौनकर्मी महिला, विभिन्न संगठनका प्रतिनिधि र रेडक्रसका प्रतिनिधिमार्फत भेट गरिएको थियो । त्यस्तै, अनुसन्धानमा सहभागी ६ सयमध्ये दुई दशमलव तीन प्रतिशतमा एचआइभी एड्सको पनि संक्रमण पाइएको छ । करिब ५८ प्रतिशत यौनकर्मी महिलाका ग्राहक यातायात मजदुर छन् ।
करिब ७० प्रतिशत यौनकर्मी महिलाले यौनकार्यमा सरिक हुँदा कन्डम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ५८ प्रतिशतभन्दा बढी यौनकर्मीले कन्डम निःशुल्क पाउने गरेका छन् । उनीहरूले कन्डम पाउने स्रोत एनजिओ तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी छन् । उनीहरूले प्रायः स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँड्ने ढाल र नम्बर वान कन्डम प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६७ प्रतिशतभन्दा बढीले उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालित क्षेत्रबाट पाँच मिनेटमै कन्डम प्राप्त गर्न सक्ने बताए । परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगबारे सोधिएको प्रश्नमा अधिकांशले कन्डम र सुईमार्फत प्रयोग गरिने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनबारे बताएका थिए ।
त्यस्तै, ५० प्रतिशत यौनकर्मी महिलाले लगाउने कन्डमको बारेमा सुनेका छन् । विवाहित यौनकर्मी महिलामध्ये करिब ८१ प्रतिशतले गर्भधारणबाट जोगिन परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
अधिकांश यौनकर्मी महिलाले एचआइभी/एड्स रोगबारे सुनेको बताए । ९२ प्रतिशतले रेडियोबाट एचआइभी/एड्सबारे जानकारी पाएको बताएका थिए । त्यस्तै, सर्वेक्षणकै क्रममा पनि करिब तीन प्रतिशत यौनकर्मी महिलाले आफूलाई विभिन्न यौनसमस्या रहेको बताएका थिए ।
३१ प्र्रतिशतले नौदेखि १४ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक यौनसम्पर्क गरेको बताएका थिए । १५ देखि १९ वर्षभित्र पहिलो यौनसम्पर्क गर्ने ६२ प्रतिशत रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, झन्डै ३२ प्रतिशत यौनव्यवसायीको विवाह ६ देखि १४ वर्ष उमेरमा भएको छ । १५ देखि १९ वर्षमा विवाह गरेका यौनव्यवसायी करिब ६० प्रतिशत छन् ।
२० प्रतिशतभन्दा बढी यौनव्यवसायीका दैनिक ग्राहक ३/४ जना हुने गरेका छन् ।
यौनव्यवसायीका ग्राहक मुख्य ६ प्रकारका रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तिनमा यातायात मजदुर, व्यवसायी, सेवा क्षेत्रमा कार्यरत, प्रहरी, औद्योगिक मजदुर र सेना छन् । यौनव्यवसायी महिलाका मुख्य ग्राहकका रूपमा रहेका यातायात मजदुरको संख्या ५७ प्रतिशत छ । अन्तिमपटक कुन पेसामा आबद्धसँग यौनसम्पर्क गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा धेरैको जवाफ 'यातायात मजदुर' भन्ने थियो ।
त्यस्तै, यौनकर्मी महिलाले विभिन्नखाले यौनहिंसाको सिकार हुनुपरेको अध्ययन प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ । उनीहरूले जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्नुपरेको समेत बताए । जसका कारण उनीहरू एचआइभीलगायत यौनरोगको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका पश्चिम तराईका ६ जिल्लाका दुई सय यौनव्यवसायीमध्ये ३३ प्रतिशतभन्दा बढीले बाध्यात्मक रूपमा यौनसम्पर्क गर्नुपरेको बताएका छन् । त्यस्तै, पूर्वी तराईका १६ जिल्लाका चार सय यौनव्यवसायीमध्ये १९ प्रतिशतभन्दा बढीले विगतमा ग्राहकले यौनसम्पर्कका लागि बाध्य पारेको बताएका छन् । २६ प्रतिशत यौनव्यवसायीले ग्राहकले भनेअनुसार गर्न नसक्दा पारिश्रमिकसमेत नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
यौनव्यवसायमा युवतीको सहभागिता बढ्दो रहेकाले एचआइभी/एड्स नियन्त्रणका कार्यक्रम उनीहरूप्रति लक्षित गरिनुपर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । यौनव्यवसायीलाई कन्डमको सहज पहुँच पुर्‍याउन एनजिओमार्फत कन्डम वितरण कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनुपर्ने, विद्यालयस्तरमै यौनशिक्षा दिन सके जनचेतना जगाउन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सर्वेक्षण दुई चरणमा गरिएको थियो । पहिलो चरणमा कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्मका दुई सय यौनकर्मी महिलामा र दोस्रो चरणमा कपिलवस्तुपूर्व झापासम्म सर्वेक्षण गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
« Reply #39 on: January 07, 2010, 10:49:09 AM »
वेश्यावृत्तिको आरोपमा गाउँनिकाला
06/01/2010 16:48:00 रामनारायण विश्वास/नयाँ पत्रिका
सप्तरी, २२ पुस : वेश्यावृत्तिमा संलग्न रहेको आरोपमा सप्तरीको एक दलित परिवारलाई स्थानीय दलित समुदायले नै गाउँनिकाला गरेको छ ।
सप्तरीको पकरी गाविस-२ सोनरा गाउँ निवासी २७ वषर्ीया परमिलादेवी सदाले वेश्यावृत्ति गरेको आरोपमा उनको पाँचजनाको परिवारलाई गाउँनिकाला गरिएको हो । श्रीमान्सहित दुई छोरा र एक छोरी रहेकी सदालाई कठ्यांगि्रँदो जाडोमा गत सोमबार राति नौ बजे गाउँबाट लखेटिएको थियो । आफ्नो परिवारलाई गाउँनिकाला गरिएपछि दुई दिनदेखि हाटी गाविसस्थित माइतीमा बसिरहेको पीडित परमिलाले बताइन् ।
'आइतबार राति श्रीमान् र छोराछोरीसँग आफ्नो घरमा सुतेकी थिएँ,' गाउँकै पुलकित सदा भन्ने व्यक्तिले मेरो घरको झ्यालबाट पटक-पटक टर्चलाइट बाल्यो,' परमिलाले भनिन्, 'घरमा सुतिरहेका वेला किन टर्च बालेको भनी ढोका खोली कराउँदा तिमी आफ्नो श्रीमान्सँग नसुती अर्काे मान्छेसँग सुतेको जानकारी आएकाले टर्च बालेर हेर्दै थिएँ भन्यो ।'
सोही विषयलाई लिएर पुलकितसँग झगडा भएकाले गाउँका अन्य सदा समुदायले सोमबार बिहान पञ्चायत बोलाएको उनले बताइन् । सोही पञ्चायतले उनी र उनको परिवालाई गाउँनिकाला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
'पुलकितसहित छिमेकी बहादुर सदा र जामुन सदाले मेरो घरमै आएर आजै यो गाउँ छाडेर भाग्, नत्र तँ र तेरो परिवार जीवित रहने छैन भनी धम्क्याए ।'
उनीहरूले आफूलाई वेश्यावृत्तिमा लागेर गाउँको वातावरण बिगारेको भन्दै कुटपिटसमेत गरेको उनको भनाइ छ । ६ महिनाअगाडि पनि उनीहरूले आफूमाथि सोही आरोप लगाउँदै पञ्चायतमा एक हजार ५१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको परमिलाले बताइन् । आफू गरिब भएका कारण उनीहरूले पटक-पटक अपमानित गर्दै आएको दुखेसो पोख्दै परमिलाले आफ्नो परिवारलाई गाउँमा बस्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेकी छिन् ।
यता, परमिलालाई गाउँनिकाला गर्ने मुख्य आरोपी पुलकित सदाले आफू एक्लैले नभई सदाहरूको जातीय बहुमतले उनलाई गाउँनिकाला गरेको बताए । परमिलाको चरित्र ठीक नभएको र सधैँ छरछिमेकीसँग झगडा गरिरहने भएकाले बाध्य भई गाउँलेले गाउँनिकाला गरेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, गाउँनिकाला गर्नेमा संलग्न पकरी-२ का पुलकित सदा, बहादुर सदा, मनोज सदा, पुच्चे सदा र बुधाई सदालाई कारबाही गर्न पीडित परमिलाले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी छिन् । जाहेरीमा उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुका साथै आफूलाई घरमा बस्ने वातावरण बनाइदिन माग गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका मुद्दाफाँटका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक रूपेश झाले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई गाउँमा बस्न वातावरण बनाइने बताए ।